सेक्स गर्दा यो कुरा गर्नुस्, सन्तुष्टि तपाइको पोल्टामा ! - Deshko News Deshko News सेक्स गर्दा यो कुरा गर्नुस्, सन्तुष्टि तपाइको पोल्टामा ! - Deshko News
सेक्स गर्दा यो कुरा गर्नुस्, सन्तुष्टि तपाइको पोल्टामा !
सेक्स, एउटा अनुभूति, एउटा क्रिया । एउटा विज्ञान । यसलाई सही ढंगले बुझेर सोही अनुरुप व्यवहार गर्न सकियो भने यो बरदान बन्छ । तर, सेक्सलाई सही किसिमले ग्रहण नगर्दा यसले नै कैयन जिन्दगी बर्बाद समेत गरेको हुन्छ । मनोविज्ञ भन्छन– सेक्सले मानिसका आम व्यवहारलाई निर्देशित गरेको हुन्छ ।
अर्थात् यौनक्रियासँग जोडिएका हर्मोनहरुले मानिसका अन्य संवेदना समेत प्रभावित गर्दछ । उदाहरणका लागि, लामो समयसम्म यौनसम्बन्धमा सक्रिय नहुने जोडी मानसिकरुपमा तनावमा या चिडचिडापन हुने, या झर्किने या भनौं अरुसँग कुरा नमिल्ने खालको हुन्छन । सेक्सको यो मनोविज्ञानलाई सही अर्थमा बुझ्न सकियो भने जीवन सुखमय बन्छ ।
सेक्सलाई कसरी बुझ्ने ?
त्यसैले सेक्सलाई एउटा कलाका रुपमा बुझ्नुपर्छ । तपाई सेक्सको निर्देशक हो । तपाई यसको मुख्य कलाकार पनि हो । तपाईले कलाकारलाई कस्तो किसिमले अभिनय गराउन सक्नहुन्छ त्यो तपाईको कौशलता हो ।
सेक्सलाई कलाको रुपमा बुझेमात्रै यसमा सिर्जनात्मकता आउँछ । यो सिर्जनशील बन्छ । यो यान्त्रिक बने समस्या आउँछ । एउटा चलचित्र जस्तै सेक्समा पनि उतारचढाव र क्लाइमेक्सको चरण आउँछ । क्लाइमेक्समा फिल्म पुर्याउन जति कोशिस निर्देशकले गर्छ, त्यही काम तपाईले सेक्समा गर्नुपर्छ ।
त्यसो भए के हो त यो क्रिया ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाईले वातावरण बुझ्नु हो । पार्टनरले के खोजेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु भयो भने तपाईको सेक्स आनन्द करिब करिब ब आधा पुरा भयो । किनभने सेक्स दुईजना बीचको मानसिक र शारीरिक अन्तक्र्रिया हो । यो अन्तक्र्रियामा तपाईले एकातिर मनको सन्तुष्टि पाउनुहुन्छ अर्कोतर्फ जैविकरुपमा तपाई सन्तुष्ट बन्नुहुन्छ ।
त्यसो भए कसरी बुझ्ने त ? यसका लागि तपाईले आफूलाई बिर्सिनुस् । तपाईले के चाहनुहुन्छ बिर्सिनुस । आफ्नो जीवन साथी या पार्टनर कुन मनस्थितिमा छ, उसले के खोजेको छ ? उसलाई अहिलेको सम्बन्ध कस्तो लाग्न सक्छ ? यदि पार्टनर श्रीमती या श्रीमान छैन भने झन बढी यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यो कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भने सोही अनुरुप पार्टनरसँग व्यवहार गर्नुस ।
पहिलो चरण मनोविज्ञानको बुझाई हो । मनोविज्ञान बुझेपछि तपाईले रतिक्रियालाई नाटकीयरुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । जस्तो तपाईलाई सेक्स गर्न मन छ र तपाईलाई तपाईको पार्टनरको इच्छा थाहा छैन भने तपाईले ए, तिम्रो गर्धन दुखेको त छैन भनेर बिस्तारै मालिस गर्नेतर्फ जान सक्नुहुन्छ या फेरी हात समातेर सुस्तरी थिचेर स्पर्शतर्फ जान सक्नुहुन्छ ।
जे होस, तपाईले परिस्थ्तििलाई ध्यानमा राखेर शारीरिक क्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । ख्याल राख्नुस, यौन भनेको लाजको विषय होृ नेपाली समाजका लागि त्यसैले इच्छा नै भएपनि कोही पनि महिला या पुरुषले यो शुरुमा नै व्यक्त गर्दैन ।
इशारा बुझ्नु पर्छ । संकेत र हाउभाउ बुझ्नुपर्छ । र, यही अनुरुप एक्सनमा जानुपर्छ । यो चरण पार गरेपछिन छ र तपाईलाई तपाईको पार्टनरको इच्छा थाहा छैन भने तपाईले ए, तिम्रो गर्धन दुखेको त छैन भनेर बिस्तारै मालिस गर्नेतर्फ जान सक्नुहुन्छ या फेरी हात समातेर सुस्तरी थिचेर स्पर्शतर्फ जान सक्नुहुन्छ ।
जे होस, तपाईले परिस्थितीलाई ध्यानमा राखेर शारीरिक क्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । ख्याल राख्नुस, यौन भनेको लाजको विषय होृ नेपाली समाजका लागि त्यसैले इच्छा नै भएपनि कोही पनि महिला या पुरुषले यो शुरुमा नै व्यक्त गर्दैन ।
इशारा बुझ्नु पर्छ । संकेत र हाउभाउ बुझ्नुपर्छ । र, यही अनुरुप एक्सनमा जानुपर्छ । यो चरण पार गरेपछि तपाईले मुसार्ने, किस गर्ने, हग गर्ने, मालिस गर्ने र बिस्तारै संवेदनशील अंग चलाउने काम गर्नुपर्छ ।
यो गरियो भने कुनै पनि महिला या पुरुष सेक्स गर्दिन भन्ने अवस्थामा हुँदैनन । यो अवस्था भनेको नशाको अवस्था हो । तपाईको मुख्य काम भनेकै पार्टनरलाई नशाको अवस्थामा पुर्याउनु हो ।